जतिसुकै बिजि भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नु होला ! नपढे तपाईंलाई प’छुतो हुनेछ – live 60media
भोलिपल्ट विहानै आमा (हजुरआमा) लाई भनें, आमाले अब तँ ठूली भइ’स भन्नुभयो । अनि त्यही दिनबाट म हजुरबासँग सुत्न छाडिदिएँ । ती १२ वर्षे किशोरीलाई कसले भनिदिनुु स्त’न पो’टाउने बेलामा दुख्छ भनेर । समय कहाँ एकै रहन्छ र ? अहिले ती १२ वर्षे किशोरी आमा भएको पनि १२ वर्ष नै भयो । सायद छोरीलाई पनि त्यस्तै भयो होला वा हुने बेला पो भयो कि ? छोरीलाई यो बेलामा यस्तो हुन्छ भनेर आफ्नो अनुभव भनेकी होलिन कि ? छोरीले जिज्ञासाको भकारी खोेलेपछि मात्रै जवाफ देलिन कुन्नि ?
असार साउनमा स्कूलमा व’र्खे छु’ट्टि हुन्थ्यो । ब’र्खा बेलामा लाग्ने पारिलो घाम, खोलामा ठूलो पानी । अनि साथीसाथी मिलेर हजुरआमाको आँखा छलेर पौ’डिनुको म’ज्जा बेग्लै । यो क्र’म चलिरहेकै थियो । पौडिदै पौडिदै त्रि’वेणीसम्म पुग्नु, अनि ल’ख’तरान भएर घर फर्कनु अनि हजुरआमाको गाली खानु, अनि कहिलेकाहीं सि’म्कनु खानु, मज्जै थियो । एक दिन, त्यो एक दिन अलि फरक घ’टना आइपर्यो । अघिपछि पौडी खेलेर फ’र्कंदा हात गोडा दुख्थ्यो । यो पटक त्यसलाई माथ खुवाउने गरी छा’ती दु’खि’रहेको थियो । लाग्यो, पौडी खेल्दा कहीं ढुं’गामा ठो’क्कियो अनि दुख्यो । घर पुग्दा अचम्मै भयो, हजुरआमा त्यो दिन हँसमुख चे’हे’रामा हुनुहुन्थ्यो । सरासरी गएर हजुरआमालाई आफ्नो पी’डा सुनाएँ, हजुराआमाले शीरदेखि पाउसम्म एक जोडी आँखा केहीबेर फ्याँ’क्नु भयो, अनि मुस्कुराउनु भयो । पी’डा सुनाउँदा हजुरआमा हाँ’सेको पहिलो पटक देखें, झ’न’क्क रीस पनि उठ्यो । त्यत्तिखेरै हजुरआमाको दुई ओठ अलग भए–‘केही भएको हैन, तँलाई बैं’श आ’को ।’
‌हो, असा’ध्यै दु’ख्दो रहेछ । ख’प्नै सकिन । आमालाई भनें, सायद आमाले पनि आफ्नो बेलाको बि’र्सि’सक्नु भएको रहेछ । छा’तीमा ट्यू’मर पलायो भनेर अप्रेशनका लागि भनेर अस्पताल पनि पु’ग्यौं । डाक्टरले यो उपचार गर्नुपर्ने समस्या हैन भने केही दिनमा आ’फैं ठीक हुन्छ भनेर पठाए । पछि मात्रै बुझें, डाक्टरले भनेका स्व’भा’विक प्रक्रिया हो । आ’त्तिनु पर्दैन भनेर । दिन ठी’कठाक चल्दै थियो, केही दिनमा छातीको ‘ट्यू’मर’ बढ्दै गयो । कपडा के लगाउने कसरी लु’का’उने भन्ने हुन थाल्यो, जे लुगा लगाए पनि अ’प्ठ्या’रो भयो । हो त्यत्तिबेला ‘ट्यू’मर’ ठानेको कुरा नै मलाई संसारकै सुन्दर चिज लाग्छ, अब त म बुझ्ने भएँ त्यसलाई म अहिले स्त’न भन्छु । अहिले लुगा लगाउँदा मलाई कुनै अप्ठ्या’रो लाग्दैन, जे सुहाउँछ त्यो ग’ज’ब्बले लगाउँछु । तर फरक यत्ति हो, हरेक पटक लुगा किन्दा ‘ट्रा’य’ल रुम’ ज’रुर पस्छु ।
← होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..
गाउँपालिका अध्यक्षलाई ‘बोका अध्यक्ष’ भनेपछि युट्यूवर सोनिका रोकायाले हालिन मुद्दा (भिडियो) →